Moodooyinka kabaha kabaha lagu socdo ee ragga - Moodhadhka Ragga leh Qaabka | Ragga Stylish
Xagaagan waxay qaataan kabaha kabaha ee ragga u socdaWaxay ku habboon yihiin socodka socodka waxayna u istaagaan inay noqdaan kuwo wax ku ool ah. Waxay aad u jecel yihiin iyaga oo sanad walba kabaha ugu fiican la hindiso, maxaa yeelay waxaad gashan kartaa kabahaaga qayb ka mid ah dharkaaga oo aad ku ciyaari kartaa isboortiga montaña. Sababtaas awgeed, rag badan u dooro kabaha noocan ah raaxadiisa iyo hawo-qaadashadeeda. Way aad u yaryihiin oo waxay ku fiican yihiin wax walba, xitaa inay safar ku aadaan boorso, ama ay mashquul noqdaan maalmaha xagaaga maalin kasta.
Ciyaaraha jecel waxaa jira moodello aad ammaan u ah oo raaxo leh in la isticmaalo. Waa lagaa saari karaa oo si fudud ayaa loo xidhayaa, waxay ku leeyihiin taageero weyn cagaha oo haddii aad rabto waxaad cagahaaga ku qoyn kartaa iyaga, taas oo qallajin doonta daqiiqado gudahood.
1 Kabaha kabaha ee ugu fiican
1.1 Iftiin kabaha kabaha trekking
1.2 Kabaha kabaha ee u adkaysiga biyaha
1.3 Kabo cagaaran oo qurux badan
Kabaha kabaha ee ugu fiican
Si aad ula imaan karto isbarbardhigaaga ugufiican, waa inaad tixgelisaa dhammaan faahfaahinta aad uga baahan tahay kabaha kabaha oo aad u fiirsato inay ku habboon tahay ujeeddadaada. Waxaa jira kabo kabo u adeega si aan dhammaad lahayn ugu soconno waddooyinka ama jidadka, ka gudub wabiyada ama xirmo fudud si aad ugu socon karto magaalada.
Waxa ay tahay inaan ku xisaabtano socodka wanaagsan waa waa ergonomic oo si fiican ula qabsada jimicsiga jirkaaga, taas ayaa laga dhigay inay suurta gal tahay qalab dabiici ah, waari kara oo neefsan kara si looga fogaado xagashada suurtogalka ah. Waxaa muhiim ah inay sidoo kale leedahay kelig adkaysi badan oo qalabkiisuna uusan biyuhu ka madhnayn.
Waxaa jira nashqado iyo moodooyin badan oo ku habboon ujeeddada in aad rabto inaad siiso xoogaa kabo sandulle ah. Runtu waxay tahay inay adkaan karto in go aan la gaaro aakhirkiina aad kudhamaato aqbalida tusaalaha naqshadeeda, laakiin waxaan kuu soo jeedineynaa liis aad iskula barbar dhigto moodooyinka ugu fiican ee adiga kugu habboon.
Iftiin kabaha kabaha trekking
Waxay yihiin raaxo iyo wejiyo badan. Waxay ku habboon tahay inaadan ku dul tuman maadaama ay aad u dabacsan yihiin, oo ay ku jiraan waxyaabo duuduuban oo yar sidaa darteedna aad u deggan. Kabahaas waxaa loo isticmaali karaa socod jilicsan, oo ka samaysan waxyaabo macmal ah iyo xir iyo xiritaan wareeg ah.
Moodooyinka aan ku dhejinay sawirrada waa a TevaTerra oo leh caag keliya, oo leh cidhib fidsan iyo waxyaabo macmal ah. Waxaan sidoo kale dooranay qaar Kabaha kabaha Asifn, oo leh nuqul caadi ah, keligood caag ah iyo maqaar lagu dahaadhay Moodooyinka soo socdaa waa Geela Taajka lagu xoojiyay korkooda si looga hortago siibashada, oo lagu sameeyay wareegsan oo suul ah oo la xoojiyay, iyo kabo caag ah. Kabaha guduudan ayaa ah Jorich, oo leh qaab aan caadi aheyn oo geesinimo leh, aad u neefsan kara kuna habboon in lagu xidho xeebta.
Kabaha kabaha ee u adkaysiga biyaha
Waxaan jecel nahay kabahaas maxaa yeelay waxay daboolayaan dhammaan qalabka si ay ugu sameeyaan kabo ku habboon buuraha. Ku habboon socodka iyo ku-tallaabada biyaha taas oo ah waxa ay jecel yihiin dad badan oo tamashleyaal ah. Waxay ka samaysan yihiin qalab loogu talagalay fudayd weyn oo qalajinta oo had iyo jeerna leh qaab fudud oo si fudud loola qabsado. Ma seegi kartid waxyaabaha ay ka kooban tahay qalabka raaxada safarada dhaadheer.
Keen's Clearwater CNX Sandals Waxaa loogu talagalay taageerayaasha buuraha iyo maalmo diiran, oo lagu qalabeeyay qalab u adkaysta, laakiin raadadka fudud iyo nolol maalmeedka badhkeed. Qaabka nafaqada Waa kabo sandulle ah oo suulku xidhan yahay iyo ergonomic. Waxay ku habboon yihiin buuraha oo ay aadaan xeebta, oo leh naqshad aan caadi ahayn iyo xarig si ay si fiican ugula qabsadaan ballaca cagaha.
Kabaha ugu horreeya ee Trekking waa kuwo aad u jilicsan oo leh suul xiran, ku habboon garaacista oo ku dhiirato inaad ku isticmaasho meelaha biyaha ku jiraan. Tusaalaha soo socdaa waa tusaale kale oo ka mid ah Keen, lagu sameeyay qaab dabiici ah oo loogu talagalay cagta, oo leh qalab badan oo gaar ah iyo xargo laastik ah xirid iyo taageero weyn. Kaligeed ayaa jilicsan oo waxay ka caawineysaa in si fiican loola xiriiro dhulka, iyada oo aan waxyeello u geysanayn anatomy-ka cagta.
Kabo cagaaran oo qurux badan
Kabahaasi waxay leeyihiin waxyaabo u gaar ah oo leh naqshad aan mugdi ku jirin, iyada oo aan gebi ahaanba isboorti ahayn iyo taabashadaas aan caadiga ahayn. Waxay ka tirsan tahay kabahaas si loogu xidho qalab kasta oo kale, isboorti iyo dharba. Bilicsanaanta iyagu waa asal, waxaa lagu qurxiyay cinjirka galmada qurxinaysa dhinacyadeeda iyo wixii ka sarreeya oo lagu sameeyay waxyaabo aad u adkaysi badan si ay u sii ahaadaan soo jiidashada ugu wanaagsan ee dibadda.
Qaabka Zerimar Waxaa loogu talagalay tayo sare leh oo maqaarka lagu dabooli karo. Iyada oo leh shay keligiis adkaysi badan oo aan siibiil lahayn, oo leh taageero sare oo cagta ah iyo in la mariyo dhammaan dhulka. Kabaha soo socda Iyagu waa moodel aad u raaxo badan, oo leh qalab maqaar oo jilicsan oo sarreeya oo leh godad dhinacyada kabaha oo dhan si ay cagtu u ahaato mid qallalan oo bakteeriyadu xor u tahay. Way u adkaysan karaan socodka dheer iyo inay awoodaan inay qoyaan.
Kabaha Tggold Waxaa lagu soo bandhigaa qaabkan gaarka ah, oo leh walxo iska caabin ah oo maqaar sare ah, caag keligiis ah oo leh dabacsanaan weyn iyo taageero weyn oo aan lahayn xargaha. Qaabka soo socdaa waa Gilkuo Waxay ku habboon tahay socodka, oo leh maqaar weyn oo maqaar ah oo lagu sameeyo qaab ku habboon si looga gudbo caqabad kasta.
Marka ay timaado xulashada kuwa ugu fiican, waxaan horeyba u ognahay inay tahay inaan xisaabino waxa aan u siineyno iyaga. Waa inay lahaadaan qabsasho qumman, oo leh cows aad u jilicsan. Naqshadeynta sidoo kale waa muhiim, laakiin waa inay ka sameysnaadaan waxyaabo waara, neefsan kara oo miisaan fudud, iyo iyadoo la adeegsanayo nidaamka taageerada u adkeysanaya cagta. Raaxo iyo dhaqdhaqaaq xor ah miisaanka kabaha wanaagsan ee trekking.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Moodooyinka kabaha kabaha ee ragga
Dhammaan noocyadan dharka ah halkan Btà, xaggee ka helaysaa. ??
Isku day inaad Google ku sameysid nooca kabaha kabaha aad hubaal ka heli doontid meesha laga iibsado Nasiib wacan iyo salaan.
Jawaab Alicia Tomero